Kaydka Maandooriyaha Xashiishka Oo Ku Burburay • Dawooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn cannabis Xashiishadda xashiishadda ayaa burburtay
maqaal by Ties Inc. 25 Oktoobar 2019
Ma dhamaan karin. Kanada waxay sharciyeysay isticmaalka, iibinta iyo beerista xashiishadda dhammaadkii sanadkii hore, gobollo badan oo Mareykan ah ayaa sidoo kale is beddelay. Shirkadaha haramaha ayaa soo shaac baxay oo saamiyada kuwa soo saarayaasha xashiishka waaweyn sida Canopy Growth, Aurora iyo Tilray ayaa si dhakhso leh u maray saqafka. Maalgashadayaal badan ayaa maalgashaday 'dahabka cagaaran'.
1 Shirkadda Horumarinta Canopy
3 Aurora Cannabis
Si kastaba ha noqotee, yaraanta dhirta ayaa dhakhso u kacday sababtoo ah baahida sii kordhaysa ee haramaha iyo, meelaha qaarkood, weed ka badan. Tusaale ahaan Oregon halkaasoo ay ka soo saaraan wax aad uga badan inta looga baahan yahay gobolka. Kordhinta haramahaas dartiis, qiimaha ayaa aad hoos ugu dhacay. Dhoofinta sidoo kale ma aha ikhtiyaar u ah sharciyada iyo qawaaniinta gobolada qaarkood ama taritoriyada.
Natiijo ahaan, waxaad arkeysaa isbeddello xoog leh oo ku saabsan saamiyada haramaha, kuwaas oo si dhif ah u xasilloon oo ku haysta dariiq aan hagaagsaneyn. Dabcan waxa jira maal-gashadeyaal aad uga xoog badnaa waqtigaas, laakiin immisa ayaa luntay ama way dhammaadeen? Marka dabcan waxaa jira arrimo siyaasadeed iyo arrimo kale oo dibedda ah oo saameyn ku leh suuqa haramaha. Su’aashu waa? Aaway kaydka ugu weyn marka loo eego sanad ka hor.
Shirkadda Horumarinta Canopy
Ka dib markii tiro badan oo sareeya leh dhibicda sare ee bilowga Maajo ay tahay 2019 oo leh wax kabadan 70 CAD (Doolarka Kanada), saamiga ayaa dib ugu dhacay qiimaha xiritaanka 28,34 CAD.
Tilray sidoo kale waxay leedahay koorso aan sax aheyn oo, ka dib markii tiro badan la saaray, hoos u dhac joogto ah ayaa la bilaabay. Qiimaha xiritaanka saamigan ayaa hadda ah 24,38 USD (US dollars) halkaas oo ay wali ku qiimeyn jirtay 106,75 USD sanad ka hor.
Maalgaliyaha joogtada ah ee Aurora sidoo kale shaqo fiican ma qabanayo. Dhowr koror kadib, saamiga ayaa hoos u dhacay qiimaha hal sano kadib.
Markaad fiiriso YoY, keydyada waaweyn ee haramaha ayaa hoos u dhacay. Halkee ayey aadi doontaa waqtiga soo socda? Waqtiyada dahabiga ah miyey soo socdaan mise saamiyada haramaha ayaa sii dhici doona? Saameyn intee le'eg ayey ku yeelan doontaa sharciyada haramaha ee Luxembourg suuqa iyo waxa horumar ah ee soo socda?
saamiyadaAmericamaalgelintacannabismaaliyad ahaankorodhkayaraanta caanaha
Xayawaanku waxay ku dheellitiran yihiin CBD
Xashiishada ayaa aad ugu isticmaasha Giriiga iyo wadamo ku yaala...
Borotiinnada Hemp ee Lidl: tayada maaha inay noqoto